म मोहनविक्रम सिंहको गोठालो होइनः चित्रबहादुर केसी - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
म मोहनविक्रम सिंहको गोठालो होइनः चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफू मोहनबिक्रम सिंहको गोठालो नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकका खगेन्द्र पन्तसँगको कुराकानीमा नेता केसीले त्यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन्। नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित केसीको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेपः
अभियोगः तपाईं नेता नभएर मोहनविक्रम सिंहको ‘फलोअर’ मात्रै हो । आफ्नो विचार दिन सक्नुहुन्न, सिंहको विचार बोकर मात्रै हिंड्नुहुन्छ । सिंहको सहयोगविना तपाईंले सास पनि फेर्न सक्नुहुन्न ।
कसैका बारेमा कसैले के बुझ्छ भन्ने कुरा उसको चेतना, अनुभव र बुद्धिले निर्धारण गर्ने हो । पुष्पलाल र तुल्सीलालसँग भारतमा महिनौँ महिना कहिले दरभंगा, कहिले वनारस, कहिले गोरखपुर त कहिले दिल्ली हिँडेर त्यत्रो संगत गरेको मान्छे, उनीहरूकै पछि किन लागिनँ? निर्मल लामाजीसँग म दश वर्ष एउटै केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेँ । मोहन वैद्यसँग दशौँ वर्ष एउटै कमिटीमा बसेको छु । उहाँ त अहिले पनि हुनुहुन्छ नि ।
०१५ सालमा मेरो मोहनविक्रमसँग भेट भयो । हाम्रो विचार, सिद्धान्त र व्यवहार मिलेको छ । उनको नीति, सिद्धान्त, राष्ट्र र जनताप्रतिको निष्ठा तथा विचार मिलेर पो उनीसँग छु ।
त्यसभन्दा पछाडि पनि त कैयौँ नेता भेट भए नि । वाम आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँ व्यक्तिहरूको संगत गरेको छु मैले । कसले मुलुक र जनताको आवश्यकताअनुसार राजनीति गर्छ, आचरण गर्छ र नीति बनाउँछ भन्ने कुरा त म पनि जान्दो हुँ नि ।
गोठालो नै बस्ने भा त एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाकै गोठालो पनि हुन्थेँ हुँला नि । त्यसकारण मलाई यस्तो आरोप लगाउने साथीहरूलाई एक त मेरो इतिहास नै थाहा भएन । अर्को, उनीहरूको त्यहीस्तरको चेतना भएर मप्रति त्यस्तो सोच आएको हो । मप्रति डाहा गर्नेहरूले यस्तो निरर्थक र काल्पनिक आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक इतिहास बुझ्दै बुझेका छैनन् ।
अभियोगः युवाहरूलाई विश्वास नै गर्नुहुन्न । भएका परी थापा, नवराज सुवेदीलगायतका युवा नेताहरूलाई पनि पार्टीबाट लखेट्नुभयो । मूलपार्टी नेकपा मसालमा मोहनविक्रम सिंह र खुला मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चामा दशकौँदेखि तपाईंले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । युवाको आकर्षण नभएकै कारण पार्टी पनि तपाईंहरूजस्तै फूर्तिविनाको बुढो र जीर्ण बनेको छ।
यो आरोप पनि खासै तर्कसंगत छैन । हाम्रो पार्टीले नवराज सुवेदी र परी थापाजस्ता युवाहरूलाई पटक–पटक बाग्लुङ, प्युठानबाट निर्वाचित गराएर माननीयसमेत बनाएको हो ।
उनीहरू पार्टीको उच्च तहसम्म पनि आएका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अथवा मसालबाट उनीहरूले जति फाइदा उठाउन सके, त्यो उठाए । त्यसभन्दा बढी फाइदा नहुने देखेपछि उनीहरू पलायन भए, भागे ।
अभियोगः जनताका अगाडि सधैँ संघीयताको विरोध गर्नुभयो । तर, संघीयताको पक्षधर तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभयो ।
हामी संघीयतालाई स्वीकार गरेर सरकारमा गएको हो र? त्यतिवेला सरकारमा सामेल भएका तत्कालीन एमाले–माओवादीका नीतिलाई समर्थन गर्न गएको हो र? हामी त हाम्रो संविधान हामी आफैँले बनाएबापत भएको भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न गएका हौँ ।
यदि एमाले–माओवादीको नीतिलाई समर्थन गरेर गएको भए त जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गथ्र्यौँ नि । उनीहरूले त सजिलै स्वीकार गरे । हाम्रो पार्टीले त त्यसका विरुद्धमा मतदान गर्‍यो नि ।
अभियोगः प्रगतिशील राजनीति गर्नुहुन्छ तर तल्लो तहमा अधिकार पुर्‍याउने संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ । राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग संघीयताको मुद्दामा कार्यगत एकता गर्नेसम्मको आन्तरिक छलफल गर्नुभयो ।
कार्यगत एकता भनेको प्रमुख दुश्मनसित पनि हुन्छ । कार्यगत एकता भनेको के हो त्यसलाई बुझ्न पनि सक्नुपर्‍यो । जुन विषयमा कुरा मिल्छ, ती विषयमा जोकोहीसँग पनि कार्यगत एकता हुन्छ ।
जनतालाई अधिकार दिनका लागि संघीय प्रणालीमै जानुपर्छ? यो झुठको खेती हो । यो नेपालमा चाहिँ अमेरिकन र युरोपियनहरूले एक प्रकारको जातीय संघीयता र भारतीय विस्तारवादले हिमाल, पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने संघीयता ल्याउन खोजेका हुन् ।
अभियोगः तपाईं उपप्रधानमन्त्री भएको र नभएकोमा पनि पार्टी र कार्यकर्तालाई खासै फरक परेन । आफ्नो स्वकीय सचिवालय बनाउनेबाहेक आफ्नै मन्त्रालयमातहतका निकायमा पनि नियुक्ति गर्न सक्नुभएन ।
अरू कैयौँले सरकारमा गएर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्कापट्टा दिन्थे । आफ्ना पार्टीका कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाएर बेच्नेलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो, सिल गर्‍यो भने उसलाई छुटाउन सत्ताको दुरूपयोग गर्थे र गरिराखेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको त्यो नीति पनि थिएन, चित्रबहादुरको चरित्रले पनि त्यो मान्य हुँदैनथ्यो । हाम्रा साथीहरू, हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई ठेक्का दिएर, कसैलाई जागिर खुवाएर, कसैलाई बढ्ता अनावश्यक ऋण दिएर, सत्ताको दुरूपयोग गरेर नजिकका साथीभाइहरूको जसरी दुनो सोझ्याउनुपथ्र्यो, त्यो हाम्रो पार्टीको नीति, चरित्र र सिद्धान्तले पनि दिँदैनथ्यो । त्यसकारण त्यो मैले गर्न नसकेको कुरा सत्य हो ।
अभियोगः पदको भोको हुनुहुन्छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर नै दिनुहुन्न । मान्छेले थाहा पाएदेखि जनमोर्चाको अध्यक्ष बनिरहनुभएको छ ।
म सधैँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष भइरहने र नयाँ पिँढीलाई मौकै नदिने भन्ने गलत कुरा हो । हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ, अधिवेशन हुन्छ । देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउँछन् ।
पर्यवेक्षकहरू आउँछन् । उनीहरूले नीति बनाउँछन्, सिद्धान्त बनाउँछन् । र, कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने कुरा महाधिवेशनले निर्णय गर्ने हो । चित्रबहादुरलाई आफैं अध्यक्ष बन्न मन लागेर सबै प्रकारका ट्याक्टिस, तिक्डम गरेर बनेको होइन ।
अभियोगः तपाईंमा निर्णय क्षमता छैन । गर्न सक्ने निर्णयबाट पनि विवादमा पर्ने डरले पछि हट्नुहुन्छ।
जसका मनमा जे लाग्छ त्यही निर्णय गर्नु व्यक्तिवादी कुरा हो । त्यो पद्धति पनि गलत हो । त्यसकारण मैले सबभन्दा धेरै विश्वास गर्ने सामूहिक निर्णयमा हो । सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो । मान्छेको मनमा व्यक्तिगत जे लाग्छ, त्यो गर्नु अराजकता हो, अनुशासनहीनता हो ।
अभियोगः भारतमा मजदुरी गरेर जीविका चलाइरहेकाहरूबाट पैसा उठाएर पार्टी चलाउनुभयो । तर, ती श्रमजीवीका पक्षमा तपाईंले जिन्दगीभर राजनीति गर्दा पनि केही गर्न सक्नुभएन।
प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको हकहितमा लड्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा अर्को कुनचाहिँ पार्टी देख्नुहुन्छ तपाईंले? प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ ।
उनीहरूलाई मताधिकार हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि लगातार लडिरहेको एउटा पार्टी जनमोर्चा मात्रै हो । अर्को कुरा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई संगठित गर्ने, उनीहरूको चेतनाको विकास गर्ने, नेपालको प्रजातान्त्रिक वाम आन्दोलनमा उनीहरूको सहयोग लिने कुरामा हामी कहिल्यै पछाडि परेका छैनौँ ।
प्रकाशित २८ पुस २०७५, शनिबार | 2019-01-12 09:57:59